Ngisabalalisa umsebenzi Wami ezizweni. Inkazimulo Yami ikhazimula emhlabeni wonke; intando Yami ikubantu abasabalele okwezinkanyezi, bonke beqondiswa yisandla Sami benza umsebenzi engibanike wona. Kusuka kuleli qophelo, Sengingene enkathini entsha, ngilethe bonke abantu komunye umhlaba. Lapho ngibuyela “ezweni Lami lokuzalwa,” ngiqale enye ingxenye yomsebenzi osohlelweni Lwami lwasekuqaleni ukuze abantu bezokwazi Ngami ngokujulile. Ngibuka umhlaba wonke jikelele ngibone ukuthi[a] kuyisikhathi esifanele somsebenzi Wami, ngakho-ke ngiyaphuthuma ngehla ngenyuka ngenza umsebenzi Wami omusha kumuntu. Yinkathi entsha le, vele, futhi sengilethe umsebenzi omusha ozothatha abanye abantu abasha ubangenise enkathini entsha bese ubeka eceleni labo engizobakhipha. Esizweni sikadrako omkhulu obomvu, sengenze isigaba somsebenzi esingaqondwa abantu ngibenze bantenge emoyeni, emva kwalokho abaningi bayaphephuka buthule nokuvunguza komoya. Ngempela lesi “yisibuya” esengiseduze ukusiqeda; yilokhu engikulangezelelayo futhi kuwuhlelo Lwami. Ngokuba baningi abangalungile abanyonyobe bangena ngesikhathi ngisebenza, kodwa angijahile ukubaxosha. Kunalokho, ngizobachitha uma isikhathi sesifanele. Kuyoba ngemva kwalokho-ke kuphela lapho ngizoba khona umthombo wempilo, ngivumele labo abangithanda ngeqiniso ukuba bazuze Kimi izithelo zesihlahla somkhiwane kanye nephunga lomnduze. Emhlabeni lapho uSathane ehlala khona okwesikhashana, umhlaba wothuli, akunagolide elicwebile, kunesihlabathi sodwa, ngakho, ngibhekene nalokhu, ngenza umsebenzi wesigaba esinje. Kumele wazi ukuthi engikuzuzayo yigolide elicwebile, elicocekile, hhayi isihlabathi. Bangahlala kanjani abakhohlakele endlini Yami? Ngingazivumela kanjani izimpungushe ukuthi zibe yizimbungulu epharadesi Lami? Ngenza konke okusemandleni Ami ukuthi ngizixoshe lezi zinto. Ngaphambi kokuthi intando Yami ibonakaliswe, abekho abaziyo ukuthi yini esengizoyenza. Ngithatha leli thuba, ngixosha labo abakhohlakele, bese bephoqeka ukuthi basuke ebukhoneni Bami. Yilokhu engikwenzayo kwabakhohlakele, kodwa lusekhona usuku lokuthi bangisebenzele. Ukufisa kwabantu izibusiso kunamandla kakhulu; ngakho-ke ngijikisa umzimba Wami ngikhombise ukucwebezela kobuso Bami kwabezizwe ukuze bonke abantu baphile emhlabeni wabo bazihlulele bona, ngenkathi ngisho amazwi okumele ngiwasho futhi nginikeza abantu lokhu abakudingayo. Uma abantu bebuyelwa yimiqondo yabo, ngizobe sengiwusabalalisile kudala umsebenzi Wami. Ngizobe sengitshela abantu okuyintando Yami, bese ngiqala ingxenye yesibili yomsebenzi Wami kubantu, ngivumele bonke abantu bangilandele eduzane ukuze bezosebenzisana nomsebenzi Wami, ngiphinde ngivumele bonke abantu benze konke okusemandleni abo ukwenza kanye nami umsebenzi okumele ngiwenze.